C8813 Step2 Failed Error ရှင်းဖို့
6:46 PM Firmwares တင်နည်း4comments
ဒီကောင်လေးကတော့ ကြာပါပြီနော် ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ..
C8813 မှာ online update တင်မိပြီး build no.173/175 တို့ကိုတင်မိပြီဆိုရင်1500 Sim Card ကိုမသိတော့ပါဘူး firmware downgrade ပြန်ဆင်းမယ်ဆိုတော့လဲ step2error ရှိနေပါတယ် အောက်ကလင့်တွေမှာပေးထားတဲ့ ဖိုင်လေးကိုဒေါင်းလိုက်ပါ zip file ကိုဖြည်လိုက်ပါ အထဲမှာ dload ဖိုင်လေးပါပါတယ် ပြီးရင် Huawei firmware တင်သလိုမျိုး dload ဖိုင်ကို SD Card ထဲထည့် Volume UP+Down &Power ခလုတ်သုံးခုလုံးတွဲနှိပ်ပြီးတင်ရပါမယ် ပြီးရင်တော့ step2error ဖြစ်နေတဲ့ 167/168/169 ဘယ် Firmware မဆိုပြန်တင်ကြည့်ပါ အောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်
Download step2error for C8813
Valentine's Day အတွက် လက်ဆောင်
9:10 PM Apk လုပ် Software3comments
ကဲ သူငယ်ချင်းတို့ရေ Valentine's Day နီးလာပြီဆိုတော့ ကိုယ်ချစ်သူနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကို Apk လေးလုပ်ပြီးသိမ်းထားကြရင်မကောင်းဘူးလားဗျာ... ဒီကောင်လေးကတော့ အရင်တုန်းကတင်ပေးဖူးတယ် ခုတော့ပြန်ပဲ အဟောင်းကိုအသစ်လုပ်ပြီး ပြန်တင်လိုက်ပါတယ် ...ကိုယ်တိုင်လည်း apk တစ်ခုဖန်တီးလို့ရသွားတာပေါ့ အောက်မှာဆက်လက်ဖတ်ပြီး ဒေါင်းလိုက်ပါ။
မလုပ်တတ်ဘူး အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် Comment ထားခဲ့ပါခင်ဗျာ / ဒီပို့ Labels မှာပဲ တခြားလုပ်တဲ့ Software တွေအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ
ဒီတစ်ခါတော့ Android photo wallpaper maker လေးတင်ပေးချင်ပါတယ်။ PC အတွက်ပါ။ Android Phone တွေခေတ်စားလာတော့ ကိုယ့်ဟာကို apk လေးတစ်ခု မဖန်တီးချင်ဘူးလား ဖန်တီးချင်ရင် ဒီဟာလေးဒေါင်းလိုက်နော် အရမ်းမိုက်တယ်
Download Android Photo Wallpapers Maker
အောက်ကဟာက ကျွန်တော်စမ်းလုပ်ထားတာပါ လုပ်နည်းကလည်းလွယ်တော့ မပြောတော့ဘူးနော်
4:56 PM Android app and Games 1 comment
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြေပုံကို Android မှာထည့်ပြီး သွားလာနိုင်ဖို့ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်.. လမ်း၊ မြို့နယ် စုံလင်ပြီး အထင်ကရနေရာတွေအပြင်-
ATMs ( ငွေထုတ်စက်)
University စတဲ့ မသိမဖြစ်နေရာတွေကို ဦးစားပေးဖေါ်ပြထားလို့ ကျွန်တော့်လို တောသားတစ်ယောက်တောင် မျက်စိလည်တဲ့ အခက်အခဲက ကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်..
ref to www.maungpauk.org
Valentine's Day အတွက် Love Keyboard.apk
4:51 PM Myanmar fonts and changer No comments
Valentine's Day အမှတ်တရ LOVE ကီးဘုတ်ဆိုတဲ့ အသဲဒီဇိုင်းလေးပါ ။
ကီးဘုတ်ဒီဇိုင်းကို Android အတွက် လူပြိုကြီး Han Zaw Oo မှ လုပ်ပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ် :D
ဒီကီးဘုတ်လေး ချစ်သူကိုပေးပြီး မျက်နှာမလုပ်ရဘူးနော်...... ငရဲကြီးမှာဆိုးလို့ :P
LOVE ကီးဘုတ်လေးကို လိုချင်သူများ အောက်မှာဒေါင်းယူပါ ။
Download Love keyboard
မှတ်ချက် ။ ။ Frozen keyboard အဟောင်းကို ဖြုတ်ထားပြီးမှ ဒါထည့်လို့ရပါမယ် :)
fixvisor for Windows ( Desktop Icon တွေရဲ့ Shortcut တွေကိုဖျောက်ထားမယ်)
4:31 PM Window Softwares No comments
ဒီဆော့လ်ဝဲလေးကတော့ မိမိတို့ကွန်ပျူတာ Desktop ပေါ်မှာရှိတဲ့ Software တွေရဲ့ Shortcut Arrow
Download fixvisor 32 bit
Download fixvisor 64 bit
Facebook Account Creation 100% Working
4:25 PM Facebook ဆိုင်ရာ No comments
Facebook Account လုပ်နည်းတွေကလည်းများလိုက်တာဗျာ...ခုလည်း ဖုန်းမလိုပါဘူး ကွန်ပျူတာနဲ့ရတယ် 100% Working ဆိုလို့ ပြန်ရှယ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
စမ်းကြည့်ရတာပေါ့နော် ရတော့လည်းအမြတ်ပေါ့ :D
တစ်ခုတော့တောင်းပန်ပါရစေ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မစမ်းရသေးလို့ မေးခွန်းမေးခြင်းသည်းခံပါခင်ဗျာ
Iphonoe Lock နဲ့ Unlock ကိုအလွယ်ကူဆုံးကြည့်မယ်
11:56 PM IOS ဆိုင်ရာ No comments
ကျွန်တော်က ဒီဘလော့မှာ အခုမှ စရေးတာပါ ရေးမယ် ရေးမယ်နဲ့ မရေးဖြစ်ပါဘူး ကျွန်တော့်ဘက်ကလည်း အချိန်မပေးနိုင်တာပေ့ါ ဒါပေမဲ့ မဖြစ်တော့ဘူး ထင်လို့ရေးမှ ဖြစ်မယ်ထင်လို့တင်လိုက်တာပါ ခုရက်ပိုင် အွန်လိုင်းမှာ Lock အလုံးကို version မြှင့်လိုက်လို့ lock ပြန်ကျသွားတာတွေ တွေ့နေရတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ဗျာ ရောင်းတဲ့လူတွေကလည်း ကိုယ်ပိုက်ဆံရ ကိုယ်ဟန်းဆန်းထွက်ပြီးရင် ဆိုပြီးရောင်းနေကျတာတွေ့ရတော့........ကဲ Intro ၀င်တာလည်းရှည်သွားပြီ
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဒီဆိုဒ်မှာ http://iphoneimei.info/ သွားပြီးတော့ ၀င်ကြည့်လိုက်ပါ
ပြီးရင် Enter Iphone Imei Number မှာ မိမိဖုံးရဲ့ Imei နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ
အဲဆိုဒ်မှာ ၀င်ကြည့်လိုက်ရင် Carrier မှာ မိမိဖုံးဟာ ဘယ်နိုင်ငံရဲ့အလုံးဆိုတာသိနိုင်ပါတယ် American ဆိုရင် AT & & , Singapore ဆိုရင် Singtel စသဖြင့်ပေ့ါဗျာ
နောက်တဆင့်ကတော့ sim lock ဆိုတဲ့နေရာမှာသွားကြည့်လိုက်ရင် locked လို့ပြထားရင်တော့ Lock အလုံးပါ ကျွန်တော်အပေါ်မှာပြထားတဲ့ပုံကတော့ Lockအလုံးပါ မိမိဖုံးဟာ unlock ဆိုရင်တော့ Unlocked လို့ပြမှာပါ အဲမှာ ချွင်းချက်အနေနဲ့ပြောချင်တာက ကျွန်တော် ဟိုတလောက အကိုတစ်ယောက် ဖုံးဝယ်တော့ လိုက်ကြည့်မိတယ်ဗျ အဲမှာ ကြည့်မိတော့ Sim Lock ဆိုတဲ့နေရာမှာ Retail Lock ဆိုတာတွေ့ရတယ် Retail Lock ဆိုတာကတော့ တနည်းအားဖြင့်ဆိုသော် Lock အလုံးလို့ပဲကျွန်တော်ထင်မိပါတယ် သူက ခုနောက်ပိုင်း Gevey Sim တို့ဘာတို့နဲ့ဖြေလို့ရတာကိုဗျ
အဲလို အလုံးဆိုရင်လည်း မ၀ယ်သင့်ပါဘူးလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ Gevey Sim နဲ့ Lock ဖြေထားရင် Lock ဖြေထားတဲ့ version ပဲသုံးလို့ရပါတယ် version update လုပ်လို့မရနိုင်ပါ
ဒါဆိုရင် Lock & Unlock ခွဲခြားနိုင်ပြီလို့သိနိုင်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဗျ
ကျွန်တော်က ခုမှ စရေးတာဆိုတော့ စားအရေးအသား ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မရေးနိုင်တာကို ခွင့်လွှတ်ပေးပါဗျ
အဆင်ပြေပါစေ . . . နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မကွေး)
9:11 PM Mobile Knowledge No comments
Credit to - Myo Ko Ko Zaw & Htet Aung Moe
Zip ဖိုင်ကိုဒေါင်းပြီး CWM ကနေ update.zip install လုပ်ပေးလိုက်ပါ
ပြီးရင် dload နဲ့ တင်လို.ရပါပြီခင်ဗျာ....
ref to www.koye9992.blogspot.com
Download လုပ်နည်း။ ** Step-1.အောက်က Download Button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ** Step-2. "5sec". လောက်စောင့်ပေးပါ။ ** Step-3. " << SKIP AD >> ".ကိုနှိပ်ပေးပါ။ ** Step-4. Download Link ကျလာပါလိမ့်မယ်။
Huawei T8951 SD ကဒ်ကနေ Firmware ပြန်ေ၇း၇င် Step2Fail error fix
9:10 PM Mobile Knowledge3comments
Huawei T8951 SD ကဒ်ကနေ Firmware ပြန်ေ၇း၇င် Step2Fail ပြတက်ပါတယ်
အဲတာဆို Firmware တင်လို မ၇ဖြစ်တက်ပါတယ် အဲလို Step2Fail ပြ၇င်
အခု ပေးထားတဲ. Dload ဖိုင်လေးကို down ပြီး Rar ဖြည် SD Card ထဲ ထည်.ပြီး အ၇င်
Huawei Firmware တင်သလို Vol (+) Vol ( - ) power နှိပ်ပြီး ဒီ Dload ဖိုင်ကို အ၇င် တင်လိုက်ပါ
ပြီးမှ ခုနက Fail ပြတဲ. Firmware ကို ပြန်တင်ပါ အဲတာဆို step2Fail မပြတော.ဘဲ
ဖုန်လေးကို အောင်မြင်စွာ Firmware တင်သွားပါလိမ်.မယ် အဆင်ပြေ နိုင်ကြပါစေ၊။
Credit- မမှတ်မိတော.လို သက်ဆိုင်သူအားလုံးကိုပေးပါတယ်ခင်ဗျာ
ABTO Software Unlocker Tool 1.3.1.0 Full
9:05 PM Window Softwares No comments
ABTO Software Unlocker Tool ကဖိုင်ရဲ့ FilePIP, လုပ်ပိုင်ခွင့်ကန့်သတ်ချက်များကို
ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေရပါတယ် ဖိုင်၊folder တွေဆော့လ်ဝဲတစ်ခုခုကလော့ချထားလို့ ကူးမရတာတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ် ဒီ unlocker ကိုသုံးပြီး ဒီပြဿ နာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်၊
Lock ချထားတဲ့ဖိုင်ကိုလည်းဖျက်(delete) နိုင်ပါတယ်၊အဆင်ပြေပါစေ။
trying to close the handle
killing process which keeps file open
unloading DLL that opened files handle
scheduling file delete on the next reboot
ref to http://www.harrisnyi.tk/
6:16 PM Android app and Games No comments
call log monitor apk ဆိုတာကတော့ call log ကို
မိမိဘာသာ ဖန်တီးခြင်း(ဥပမာ ဖုန်းမ၀င်ဘဲနဲ့ ၀င်အောင်လုပ်ခြင်း)
SMS ကိုလည်း မပို့ဘဲနဲ့ ပို့အောင်ဖန်တီးခြင်း တွေကို ပြုလုပ်နိုင်ပါ
တယ် ပြီးတော့ မိမိဖုန်းထဲသို့ ၀င်လာသော call log တွေ SMS တွေကို
Auto Delete လုပ်ပေးခြင်းတို့လည်း ပါဝင်ပါတယ် (ဥပမာ ပြောရရင်
မိမိက မမြင်ချင်တဲ့ ဖုန်းနံပတ်ထဲက မက်ဆေ့တွေ ပို့မယ် ဖုန်းတွေခေါ်မယ်
ဆိုရင် call log ထဲမှာ သွားပေါ်နေမယ် မက်ဆေ့ထဲမှာ သွားပေါ်နေပါလိမ့်မည်
ဒီကောင်လေးကို အသုံးပြုထားမယ်ဆိုရင်တော့ မိမိမမြင်ချင်တဲ့ မက်ဆေ့တွေ
call log တွေကို Auto ဖျက်ပေးပါလိမ့်မည်။ Fake SMS တွေ Fake Call တွေ
လည်း မိမိဘာသာ ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ Android version 2.2 အထက်မှာ သုံး
Credit to Aung Min Han
iPhone Pattern & Password Lock ဖြည်နည်း
6:11 PM IOS ဆိုင်ရာ No comments
2. iFunBox အသုံးပြုပြီး "Raw File System" (File mgr.) ထဲ ဝင်ပါ။
3. /Library/MobileSubstrate/DynamicLibraries ထဲဝင်ပြီး AndroidLock နာမည်နဲ့အစပြုတဲ့ ဖိုင်နှစ်ခုကို Delete လုပ်ပါ။
4. iDevice ကို ပါဝါပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်ပါ။
5. မြင်နေကျ "Slide to Unlock" ဆိုတဲ့ screen ကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။Done!
iFunbox ကို ဖွင့်ပါ။ ပြီးလျှင် /var/mobile/Library/Preferences ကို သွားပါ။
com.zmaster.AndroidLock.plist ဆိုတဲ့ File Text Editor တစ်ခုခုနဲ့ ဖွင့်ပါ။
<string>123456 </string> ကြားက နံပါတ်များသည် Password ဖြစ်ပါတယ်။
credit to http://www.mm-mpxteam.net/
မြန်မာစာမမှန်သေးတဲ့ဖုန်းတွေအတွက် Uniscope Bat installer
3:59 PM Myanmar fonts and changer6comments
Myanmar Font သွင်းလို့ မရတဲ့ Android တွေအတွက်ပါ
အမှန်က ကျွန်တော့် ကုမ္ပဏီ Uniscop U1205 A+ Model က Huawei Y511 လိုပဲ Myanmar Font မရပါဘူး အဲ့အတွက်ရှာရင်း ကလိရင်းနဲ့ ကိုကျော်စွာသွင် က Smart Zawgyi Pro ကို ထုတ်လိုက်ပါတယ် Smart Zawgyi Pro နဲ့လည်း Uniscope က Font မရသေးပါဘူး နောက်ဆုံး ကျွန်တော် ညီလေး သားဂျူး နဲ့တိုင်ပင်ပြီး Han Zaw Oo ရဲ့ Y511 Font လေးနဲ့ ဒီ Bat ဖိုင်လေးကို ဖန်တီးဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။
Android တော်တော်များများမှာ Myanmar Font ကိုအဆင်ပြေပြေမြင်ရပါတယ် အခုဝင်လာတဲ့ Android Model တော်တော် များများကို စမ်းသပ်ပြီးအောင်မြင်လို့မျှဝေလိုက်တာပါ...။
လေးစားစွာဖြင့် Credit ပေးပါတယ် : ကိုကျော်စွာသွင်
: Han Zaw Oo
Y300-0000 Step2Failed Error ရှင်းမယ်
3:48 PM Firmwares တင်နည်း 1 comment
Huawei Y300-0000 တွေ Firmware တင်တဲ့အခါ Step2မှာ Failed ပြပြီး
ဆက်မတက်တော့တဲ့ ပြဿနာ တက်နေရင် အောက်ကဖိုင်ကို ဒေါင်းပြီး ဖြည်လိုက်ပါ.. ရလာတဲ့
dload ဖိုဒါကို SD Card ထဲထည့်ပြီး Firmware တင်သလို အရင် တင်လိုက်ပါ.. ပြီးမှ
ကိုယ်တင်ချင်တဲ့ Firmware ကို တင်လို့ရပါပြီ..
Tested in Build B182
အဆင်ပြေပါစေ.. - See more at: http://koye9992.blogspot.com/2014/01/huawei-y300-0000-firmware-update-step-2.html#sthash.mJckJcOF.dpuf
ဆက်မတက်တော့တဲ့ ပြဿသနာတက်ရင် အောက်ကဖိုင်ကို ဒေါင်းပြီး ဖြည်လိုက်ပါ.. ရလာတဲ့
Credit to www.maungpauk.org
ImTOO DVD Ripper Ultimate (အတွဲလိုက်ဖြစ်နေသော Video ဖိုင်များ တစ်ပုဒ်ချင်း လုပ်မယ်)
3:40 PM Converter Softwares No comments
DVD ခွေတွေမှာအတွဲလိုက်ဖြစ်နေသော video ဖိုင်များကို ImTOO DVD Ripper Ultimate အသုံးပြုခြင်းဖြင့် video တစ်ဖိုင်ချင်း ရအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်
ref to www.mmithelper.com
Y511-T00 firmware နှင့် တင်နည်း
Y511 -T00 ဖုန်းတွေမှာ မြန်မာစာအဆင်မပြေတာကြောင့် မြန်မာစာစမ်းရင်း ဖမ်းဝဲပြန်မတက်တာတွေ ကြုံတာများနေကြပါပြီ… ကျွန်တော်လည်းအပါအ၀င်ပေ...
G610 Font မှန်မှန်ကန်ကန် မြင်ရဖို့ 
"Huawei G610 Myanmar Font" ခုတင်ပြမယ့် အကြောင်းအရာကတော့...Huawei G610 မှာ...Myanmar Font ထည့်နည်းကို....အဆင့်ဆင့်တင်ပြသွားမှ...
Android application ရေးသားနည်း အဆင့်ဆင့် PDF စာအုပ်
ကဲဘော်ဒါတို့ရေ စိတ်ဝင်စားရင်ဒေါင်းသွားနော် ကျွန်တော်လည်း ခုမှလေ့လာကြည့်ရဦးမယ် ဘော်ဘော်တို့လည်းလေ့လာလိုက်ဦး။ အသုံးဝင်မယ်ထင်ရင် အာက်ကမှ...
4.2 ကနေ 4.2.2 အထိ Google app သွင်းပေးမယ့် MMSD Gapp Installer
4.2 ကနေ 4.2.2 အထိ Google app သွင်းပေးမယ့် MMSD Gapp Installer လေးထွက်လာပြန်ပါပြီ။ ကဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ မြန်မာ Developer တွေရဲ့ကျေးဇူးကြော...
Huawei G610-U00 မှာ Google application သွင်းနည်း
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ . . . စီဘောက်မှာ မေးထားတဲ့အတွက် အားလုံးလည်း သိရအောင် ပို့စ်မှာပဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ . . . ဒါဆို စပြီးပြော...
Software များ ဒေါင်းလုပ်ချရန်
About Me (1) Activater Softwares (4) Android (35) Android app and Games (130) Animation Soft (1) Antivirus Soft (9) Apk Logo ဖော်တဲ့ Soft (1) Apk လုပ် Software (4) Audio နှင့်ဆိုင်သော ဆော့လ်ဝဲများ (3) Blog ဆိုင်ရာ (8) CD Keys (1) Converter Softwares (6) copier Softwares (4) CWM သွင်းနည်း (4) Design (1) Facebook ဆိုင်ရာ (12) Firmwares (22) Firmwares တင်နည်း (7) G-Talk ဆိုင်ရာ (1) Gmail (1) Hardware (1) HuaweiံCustom Rom (1) Huawei Google app သွင်းနည်း (9) Huawei Root (15) I-Phoneဆိုင်ရာ (1) IDM Soft (7) Internet Browser (3) Internet Jorunals (2) Internet Setting ချိန်နည်းများ (3) internet speed (2) IOS ဆိုင်ရာ (4) Launcher (1) Manager Soft (1) Message Problem (1) Mobile Knowledge (11) Myanmar fonts and changer (14) Pattern Lock & Password (3) Phone IMEI Hidden (1) Photo နှင့်ဆိုင်သော (6) Player Softwares (2) Root Tools (35) Root လုပ်နည်းများ (7) Samsaung Odin (1) Service Tools (1) SimLock (1) Softwares (47) Sony (1) Video Edit (1) Wifi နှင့် ပတ်သက်သောစာအုပ် (1) Window7Password ဖျက်နည်း (1) Window 8 Password ဖြတ်ကျော်နည်း (1) Window Softwares (26) Window ဆိုင်ရာစာအုပ် (5) စာအုပ်များ (33) နည်းပညာ (55) ဖိုင်ချုံ့နည်း (1) ဖုန်းဆိုင်ရာ (1) သတင်းရေးရာအဖြာဖြာ (15)
Blogger များအတွက် လေ့လာရန်
Apk Logo ဖော်တဲ့ Soft
Apk လုပ် Software
Audio နှင့်ဆိုင်သော ဆော့လ်ဝဲများ
HuaweiံCustom Rom
Huawei Google app သွင်းနည်း
Myanmar fonts and changer
Pattern Lock & Password
Phone IMEI Hidden
Wifi နှင့် ပတ်သက်သောစာအုပ်
Window7Password ဖျက်နည်း
Window 8 Password ဖြတ်ကျော်နည်း
Copyright © နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မကွေး) | Powered by Blogger